Graphic Designer | NGWE OAK TRADING COMPANY LIMITED ﻿
•	Photoshop , Illustrator ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။
•	Creative idea ဖြင့်ဖန်တီးမှုများအား အနုပညာဆန်စွာသေသပ်လှပရမည်။
•	Social Media Facebook Page များ နှင့် Vinyl စသည်ဖြင့် အများနဲ့မတူဆန်းပြားသည့် Idea များနှင့်လုပ်ဆောင်ပေးရမည်။
•	Team ဖြင့်စုပေါင်းလုပ်ဆောင်တက်ရမည်။
•	Advertising Plan အတိုင်း ကြော်ငြာများထည့်သွင်းနိုင်ရန်အတွက် ဒီဇိုင်းများရေးဆွဲခြင်း
•	Exhibition ပွဲများ၊ Promotion ပွဲများအား ကြော်ငြာနိုင်ရန်အတွက် ဒီဇိုင်းများရေးဆွဲခြင်း
•	Exhibitions ပွဲများအတွက် ပြခန်းဒီဇိုင်းများရေးဆွဲခြင်း
•	Customers များအား လက်ဆောင်ပေးရန်အတွက် Marketing Kits များအား တွက် ဒီဇိုင်းများရေးဆွဲခြင်း
•	Service ရရှိသောနေရာများ၊ လူစည်ကားသော နေရာများပေါ် မူတည်၍ Billboard (သို့မဟုတ်) LED Logo Board အား ကြော်ငြာနိုင်ရန်အတွက် ဒီဇိုင်းများရေးဆွဲခြင်း
•	အရောင်းစင်တာများအတွက် လိုအပ်သော Flyers များ Promotion ကြော်ငြာစာရွက်များ၏ ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်များအား ဖြည့်စွက်ပြီး ဒီဇိုင်းအသစ်ပြုပေးခြင်း
•	(Billboard, Journal & Newspaper etc.) တို့တွင် ကုန်အမှတ် တံဆိပ် ကြော်ငြာခြင်း အတွက် ဒီဇိုင်းများရေးဆွဲပေးခြင်း
•	journal , သတင်းစာ, Magazine များအတွက် လစဉ် Design အသစ်များ ရေးဆွဲခြင်း စသည်တို့လုပ်ဆောင်တက်ရမည်။
•	Any Graduate person, good personality.
•	Age between 25~30 years.
•	Must have at least3years’ experience in the related field.
•	Can use Adobe Photoshop, illustrator software and Corel draw software.
Graphic Designer Arts, Crafts, and Design Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon NGWE OAK TRADING COMPANY LIMITED Arts, Crafts, and Design Arts, Crafts, and Design Retail/Wholesale Jobs in Myanmar, jobs in Yangon